Ndị Bishọp Ọgọmmụọ Germany atụpụtala atụmatụ Oriri Nsọ maka ndị Protestant – gloria.tv
Ndị bishọp nke [bụbu] Ụka KatọlikCm na Germany na-adaba n'ike n'ike n'ime apịtị agọm mmụọ na enweghị okwukwe.
N'oge nzukọ ha na Ingolstadt nke gwụrụ na February 22, ha tụnyeere n'igwe n'uzo ịnye [arụ] Oriri Nsọ nye ndị Protestant, ndị lụrụ onye Katọlik married. N'uche Ụka, atụmatụ a enweghị isi maka na ndi bishọp enweghị ikike ikpebi ụdị mkpebi a gajọrọ ozioma Chukwu.
Site na katholisch.de (February 22) ndị bishọp ahụ kọwara "ọnọdụ" maka ịnata Oriri Nsọ nke arụ a, dị ka,"ịgwa ndị Fada" nakwa "ikpebi n'ime obi" na onye ahụ kwadoro okwukwe Katọlik. Ma na onye kwadoro okwukwe Katọlik, ka a gbanwe bụrụzịa onye ụka ahụ.
N'ịga n'ihu: Kedụ otu onye Protestant ga-esi anata oriri, ma ọ bụrụ na ọ gaghị confession tupu ọ nata ya, dị ka iwu Ụka kwuru?
Kadịnal isiekweọnwụ Munich Kadịnal Marx kpọrọ agwa mmehie ndị bishọp a “ezigbo ọganihu" na-ekwu na atụmatụ ọhụrụ ga-apụta nke ga-eso uzo "ọnọdụ onye". Ọ sịkwara na onye Protestant abụchghị na ọ ga-agbanwe banye usoro Katọlik ka ọ nwee ike nara oriri nsọ sitivess”
Mkpebi ndị bishọp Germany a bụ atụmatụ ị ji "nabata" nke bụ eziokwu na Germany a na+akpọ ndị na-abụ́ghị ndị Katọlik ka ha bịa nata oriri. Mmejọ a na-aga n'ihu maka na liturgy na Germany a daala nke ukwu ruo na Orisi Nsọ abụghị ihe ana ekpe ọfụma nke pụtara na sọọsọ obere achịcha ka a na-enye ndị okwukwe, nke ndị Protestant nwere ike ịta.
Foto: Rainer Maria Woelki, Rainhard Marx © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsWerabdsrgt
ig.news mentioned this post in Kadịnal Germany na ndị Bishọp German nọ n'iro.
355 Apr 8, 2018
293 Apr 8, 2018
288 Apr 8, 2018
304 Apr 7, 2018
283 Apr 6, 2018
362 Apr 6, 2018
286 Apr 6, 2018
312 Apr 6, 2018
281 Apr 5, 2018
47 Apr 5, 2018
65 Apr 5, 2018
41 Apr 5, 2018
46 Apr 4, 2018
48 Apr 4, 2018
58 Apr 2, 2018